Wawa ngothando kunye atshate umntu ukuba bazimanye uthando kunye umyeni
Wawa ngothando kunye atshate umntu, kwaye sele umbuzo kukho: Njani Ezinzima kuya kubanjalo. Uya kufumana i-wokuqhawula umtshato kwaye mna nyani. Kubalulekile i-affair, ayo discovery kwenza kunye nobomi i-Imeyl okanye Ndonwabe iphela. Kodwa kuqala umbuzo uthi: Kufuneka ndiya kuthabatha le budlelwane kwaphela. Uyakwazi kunjalo kwenzeka kuphela ukuba omnye sele ezikhoyo umtshato mhlophe. Ezininzi abantu ngaphandle emva de kamva. Ukuba uyazi ukuba lo mntu utshate, wenze amanye amathuba kwi-Risk assessment.
Countless marriages emhlabeni waqalisa xa omnye okanye bobabini partners batshata. Kananjalo, countless budlelwane nabanye kuba existed iminyaka emininzi e-iqela leenkwenkwezi ka-atshate umntu kwaye mistress. Abanye abafazi waphila iminyaka emininzi e-nethemba lokuba uya kwenza wayo kuza isithembiso inyaniso kwaye ezinye phuma kodwa yena zange ndazenza. Yena mhlawumbi waba zange. Kukho Bigamist, kwaye kukho zomoya Bigamist. I-crucial umbuzo ayikho Into mna silindele ukusuka atshate umntu, kodwa ndim ukuba lowo utshate. Kuba abanye abafazi a atshate umntu strictly ngaphandle-imida. Oku noble attitude. Uyakwazi rhoqo isicelo kubo nkqu. Noko ke, kwezinye iimeko, uyayazi umntu ngcono kwaye kweharmony ayikho kangaka ukuba elahlukileyo ungagcina phezulu. Ngamanye amaxesha unabo watshata ezingachanekanga elonyuliweyo kwaye ibetha kakhulu emva kwabo ukuba kubonakala njengoko yenziwe. I-iqela leenkwenkwezi ka-budlelwane nabanye ngabo njengoko varied kwaye diverse njengoko ubomi ngokwayo. Wonke umfazi kufuneka, Willy-nilly, isigqibo sokuba ingaba ufuna kuziphatha. Kufuneka zibuze, njani vala awuqinisekanga ukuba le ndoda ukuba kuza ihamba ungathanda kwaye nokuba ufuna kusenokwenzeka ukuba njengokuba frustrated lover. Kufuneka ucele nokuba umtshato lomnye yiyo ngokwenene njengoko umyalelo njengoko yena pretends ukuba yakho kwaye nokuba ngaba okanye hayi ke ovumelekileyo ukuba ukugqobhoza kwi ekhoyo umtshato. Ekugqibeleni, ubuya ufuna zange kunyaka omnye ke ubomi obubobakhe. I-kwendlela umbuzo uthi undoubtedly ebalulekileyo. Ingakumbi ukuba abantwana basemazweni umdlalo. Thina ngokuqinisekileyo kuba ngumthwalo kuba yintoni bethu Iintshukumo ingaba. Kodwa sathi kanjalo kuba uxanduva lwethu ulonwabo. Ukuba abantu asingawo bethembekile kwaye umoya rhoqo rogue, uyayazi wonke umfazi. Yakho ngu nkqu kwazeke ukuba Abantu bakho rhoqo hayi kuphela mentally uye rogue, kodwa kanjalo lokwenene. Nkqu ukuba ufuna ukukhangela iqela leenkwenkwezi kuzo zonke yayo variants, umntu unako zange ndiyazi apho ibali siphela. Ukuba ukhe ubene ngothando kunye atshate umntu, ingaba Ingxaki. Kuyimfuneko ukuba khangela, nokuba ngaba unesigulo umncedi syndrome kwaye supposedly Unpopular ukusuka yayo nicinge ubomi ophilayo esihogweni ufuna uncedo. Omnye kufuneka ucele, nokuba ngaba umfazi ebeya kuba mhlawumbi ngaphezu congenial, kwaye ingaba ikhona kakhulu ezahlukeneyo wokuqhawula umtshato.
Kufuneka zibuze, yintoni
Uvakalelo ziindleko kunzima nto plunge kuwe kwi kwiimeko apho kuwe, nento yokuba kodwa hayi Wake up. Yonke into nabani na, inkumbulo, wacinga malunga watshata abantu, xa ngothando. Ukuziqhelanisa ufumana into ethile. Nokuba ngaba lixoxiwe ekuqaleni kubudlelwane, umtshato emntwini, okanye ngokuthe cwaka malunga, ngokulula, ezahluka-hlukileyo. Ngokukhawuleza okanye kamva, kodwa kubalulekile umxholo ubuncinane kwi-omnye ke, kunye umphefumlo. Ukuba lowo bakhe umhla wokuzalwa inikwe kuphela kunye nomfazi, kwaye kuphela ngoko kunye Oyintanda, ukubhiyozela, Ewe, uzole owamkelekileyo. Kodwa ngexesha Christmas, enew konyaka u-eva kwaye ngethuba lakhe iholide, yedwa, ibetha a harder. Ingakumbi ukuba kunzima aliqela eminyaka ngoko ke, enye nemimangaliso kutheni omnye ubomi. Le Meko ibiza kuba humiliation kwaye grief. Oyintanda isoloko ivela kwi-yesibini ndawo, kwaye zonke umonde, akukho okulungileyo kuye. Abantu bakho rhoqo ungquzulwano-averse kwaye hesitate ukushiya endala budlelwane. Kufuneka silindele umfazi ukuya kuma iminyaka emininzi njengoko a oyintanda, gcina kuwe isithembiso kwaye silindele abantu ukuqonda kwenu. Iingxaki ka-Oyintanda ukuba abe omnye wembambano kwaye ekupheleni ingoma yena amagqabi kuwe. Kodwa kukho kwakhona enye-guquko lomdlalo we ibali. Abanye abafazi ingaba iselwa uvuma nge mistress endaweni umfazi. Uyakwazi bonwabele a free ubomi kwaye nazi sisebenzisa wayemthanda nakanjani na. Ezininzi ezifana budlelwane nabanye wanga ungakunqandi okanye iminyaka, ngaphandle umyeni amagqabi nomfazi. Kwaye oku nangona kunjalo ukuba ulwalamano ezimbini ufumana kunzima ukusebenza ngokupheleleyo alaphukanga. Inkosikazi owaziyo mhlawumbi sele evela yakhe competitor, kodwa yena kukuthi cwaka kanjalo njengokuba ukuba Amalungiselelo. Kwi end, bonke abantu humiliated, nkqu ukuba baya kuba kuza imiqathango kunye Imeko. Nganye psychological Ibhunga ngu failing kwi-kobuso beli name. Yintoni ihlala ngomnye u-owakhe uxanduva, ngubani omnye yenza ubomi bakhe. Mhlawumbi wonke umfazi wesibini ukuba xa wayeneminyaka mistress a atshate umntu, ingaba ufuna ukwenza oku esihogweni ngonaphakade kwakhona. Cupid ke isalathisi ke ezilahlekileyo kodwa nangona kunjalo kuqhubeka kuba watshata abantu. Wonke umfazi thinks oku ayikwazi zange kunokwenzeka. Kude kube kwenzeke.
Zeziphi iingcebiso ingaba ufuna kunikela kuye. Lo ngumbuzo sidinga ukuba buza ngokwethu kuyo yonke imeko yakho ubomi: dare ukwenza into ethile okanye andikho ethabatha na chances. Ngaphandle ethabatha imingcipheko, awunokwazi amava, emva kweminyaka emibini, wokuqhawula umtshato kwaye nkqu njengoko a Umfazi ngexesha lakhe icala wakes phezulu. Kodwa awunokwazi ukwenza opposite. Ubomi uzele imingcipheko kwaye akukho nto ethile, ngaphandle kokufa. Ukususela incopho ka-okubonakalayo inkosikazi imbali unfolds ngothando kunye atshate umntu osuka kunzima ukusebenza ngokupheleleyo imbono eyahlukileyo. Amaxesha amaninzi, baya kwazi nto wakhe competitor, kude kube a random uncovers ibali. Kanjalo, babekholelwa, ayikwazi zange kunokwenzeka, okanye ungakwazi kuba njengaye rival, kwaye mhlawumbi phantsi iimeko ezahlukeneyo, kodwa kuqala, kufuneka yenza eyakho ulonwabo, yeemvakalelo zakho Name rhoqo ityala kunye abafazi ke ukoyika. Umntu indulges kwi-ukuthanda ukrexezo kwaye Name rhoqo kukho kuphela, ukuba mistress amabango, okanye ophilayo reproach. Cheated ekupheleni zonke ezintathu kwaye xa abantwana baba kulo umdlalo, ngokunjalo. Kutheni na abanye abantu ndonwabe budlelwane, kwaye abanye. Kwinkqubo yethu free E-Mail Coaching, sifumana impendulo ezi kunye nezinye imibuzo jikelele izihloko Lwahlulelwano kwaye budlelwane. Sifuna Wena ukuze ndonwabe.
Apha iyagqitha pha
← Yena ayikho ilungele kuba ezinzima budlelwane Dill
Ilizwi incoko →